Warbixin: Weerarka Westgate Mall oo Maalintii Afaraad socda // Live Blogging ++ Daawo | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Weerarka Westgate Mall oo Maalintii Afaraad socda // Live Blogging ++ Daawo
Nairobi (KON) - Weerarkii Suuqa laga adeegto ee Westgate Mall Nairobi ayaa lasoo sheegayaa inay ku geeriyoodeen Dad badan oo Ajaanib ah, walina Askarta lama aysan wareegin Suuqa.
Maalintii Afaraad - Keydmedia Online Live Blogging
Wariyaha Keydmedia Online iyo Wariye u shaqeeya Wakaalada AFP ayaa Daqiiqad walba idinla socodsiin doonaan Xaalada Westgate Mall. Boggaan kala soco Live Bloggingka Labada Wariye, sidoo kale wixii Masawirro ama Video ah halkaan ka fiirso. - Keydmedia Online, Nairobi
Kenyatta: Waan la Wareegnay Suuqa Westgate
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Caawa sheegay in ay Gacanta ku hayaan Suuqa Westgate iyo qaar kamid ah Kooxdii Argagixisada.
Uhuru ayaa sheegay in uu fuliyay wacadkii uu ka qaaday shacabka Kenya oo ahaa in la jabiyo argagixisada ku sugnayd xarunta Westgate.
Kenyatta oo Shir Jaraa'id qabtay ayaa sheegay in hawlgalkii ugu dambeeyay lagu dilay 5 kamid ah Kooxdii Argagixisada, halka ay xireen Ciidamada Amaanka 11 oo kale, wuxuuna sheegay in ay ku jiraan muwaadiniin u dhalatay dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
13:14: Kooxda Al-Shabaab ayaa beenisay Warka Ciidamada Kenya oo sheegay in ay Dadkii la haystay ay kasoo sareen Suuqa. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay wali Dad ku haystaan gudaha Suuqa, una badanyihiin Dad u dhashay wadamada reer Galbeedka.
Wararka laga helaayo Xaalada Suuqa Westgate ayaa ah Warar iskhilaafsan. Ciidamada Amaanka, Millitariga iyo Wasaarada Arimaha Gudaha ayaa Warar kala duwan ka sheegeen Dadka lagu dilay gudaha Suuqa. Ilaa iyo Shalay waxaa la sheegay in Ajaanib badan ay ku dhinteen Weerarkaas oo ay ku jiraan 6 haysato dhalashada Britain. Saakay ayaa Warkaas waxaa beeniyay isla Wasaaradii, sheegtaynah in 1 britain ah uu ku dhintay Weerarka.
11.44am - Ciidamada Milatariga Kenya ayaa Daqiiqado kahor sheegay in ay gebi-ahaan la wareegeen xarunta Canacsiga ee Westgate.
Ciidamada ayaa shaaciyeen in ay hada Xarunta Gacantooda ku jirto kadib markii tan iyo sabtidii la soo dhaawafay ay ku jireen rag hubeysan oo halkaas ku haystay dad la-haysteyaal ah.
Ciidamada Kenya oo taageero ciidan ka helaya dalal dibadda ah ayaa u suurtagalin Afar Maalmood in ay la wareegaan Xarunta, waxaana ilaa iyo Saakay ka socday Gudaha Xarunta Is-rasaaseyn.
Waxaan wali la shaacin, si rasmi ahnah loo oggeyn in gacanta lagu dhigay Kooxda Argagixisada iyo in kuligood la dilay.
Waa Maalintii Afaraad oo uu Weerarku socdo, walina uma suurtagalin Askarta in ay badbaadiyaan Dadka Suuqa wali lagu haysto.
9.25am - Ciidamada Amaanka Kenya ayaa sheegeen inay Howlgalkaan kaga dhaawacmeen 10 Askari oo ciidamadooda ka tirsan.
9.25am - Is-rasaaseyn ayaa Saakay laga maqlayay Gudaha Suuqa, waxaana jira Warar sheegaya in Hal Askari la dhaawacay.
8.30am - Militariga Kenya ayaa sheegay inay dileen 6 ka tirsanaa Kooxda Argagixisada Xarunta Westgate, inkastoo Afhayeen u hadlay Booliska uu sheegay in ay dileen 4 Qof. Sidoo kale, Askarta ayaa sheegeen in ay soo badbaadiyeen inta badan dadkii ku jiray gacanta maleeshiyada.
Inkastoo Wakaalada Wararka ee Press Association ay Shalay Faafisay in 6 Muwaadin oo British ah ay ku dhinteen Weerarka Westgate, Wasaarada Arimaha Dibada Ingriiskanah ay Axadii sheegtay in 3 Qof ay ka dhinteen, hadana Saakay isla Wasaaradii ayaa shaacisay in 1 Qof uu uga dhintay Weerarkaasi.
Maalintii Sadexaad - Keydmedia Online Live Blogging
Waa 11:00 oo Habeenimo, Xafiiska Keydmedia Online ee Nairobi meshaan ayuu Shaqada ku joojinayaa Maanta. Hadii alle idmo bari Subax ayaan Wararkii ugu dambeeyay idiin soo bandhigi doonaa. Boggan waxaa ka Aqrisan kartaa wixii Maanta dhacay. - Keydmedia Online, Nairobi
Xaalada Caawa iyo Suuqa Westgate
Dagaalkii wali ma uusan dhammaanin, waxaana wali gudaha Suuqa laga maqlayaa Is-rasaaseyn. Sidaan Galabtay soo Qornay, Saddex ka tirsan Kooxda Argagixisada ee ku jira xarunta Westgate ayaa la dilay, sidaas waxaa sheegay Nabad Sugidda.
Waxaa Howlgalkii Maanta ku dhaawacmeen 11 Sskari oo ka tirsan Ciidamada militariga Kenya, 4 kamid ah Xaaladoo waa Adagtahay ayaa lagu Qoray Warbixinta.
Ciidamada ayaa sheegeen in ay inta badan Dadkii la haytay ay soo saareen, inkastoo aysan wali cadeyn inta Gacanta Dableyda ku jirta.
Wakaalada Wararka Press Association ayaa Caawa shaacisay in Dadka Dalka Britain uga dhintay Weerarka ay hada marayaan 6 Qof.
16:50 (Saacada Nairobi) - Hay'adda Red Cross ayaa shaacisay in ay Suuqa Westgate ku dhinteen 62, kadib markii ay Xalay faafisay in ay dhinteen 68 Qof.
15:30 (Saacada Nairobi) - Ciidamada Kenya ayaa sheegeen in ay la wareegeen Guud ahaan Suuqa, inkastoo Kooxda Al-Shabaab ay wali haystaan Dad aan Tiradooda wali la aqoon.
14:48 (Saacada Nairobi) - Ciidamada ayaa shegeen in ay Dileen labo kamid ah Kooxda Weerarka ku qaaday Suuqa, halka kuwo kale ay ku dhaawacmeen. Waxey ku fureen Gaaska lagu suuxo si ay usoo daayaan Dadka meesha lagu haystay. Faah-faahin fillo dhawaan, Sidoo Ciidamada waxey shaaciyeen in tiro dad ah oo afduub loo haystay ay kasoo badbaadiyeen goobtaas.
13:58 (Saacada Nairobi) - Booliska ayaa sheegeen in ay Darbi Qarxiyeen si ay u galaan Qeyb kamid ah Suuqa.
"It is us who caused the explosion, we are trying to get in through the roof."
13:28 (Saacada Nairobi) - Wasaarada Arimaha Dibada ee Britain ayaa Xaqiijisay in Afar Muwaadin oo haysta dhalashada Britain ay ku dhinteen Weerarka Westgate Mall.
13:00 (Saacada Nairobi) - Qaraxyo Xooggan oo laga maqlay gudaha Xarunta:
13:00 (Saacada Nairobi) - Waxaa laga baqayaa in Nimanka Suuqa Weeraray ay xiranyihiin Walxaha Qarxa
— Aislinn Laing (@Simmoa) September 23, 2013
12:10 (Saacada Nairobi) - Wakaalada Wararka ee AFP ayaa sheegtay in Kooxda Weerarka ku qaaday Suuqa ay wali haystaan Dad badan, inkastoo Ciidamada Amaanka Kenya ay sheegeen in ay inta badan soo daayeen. Sidoo kale Wariyaha Guardian ee Nairobi oo la hadlay Sarkaal ka tirsan Nabad Sugida ayaa sheegay in aysan jirin Dad laga soo saaray Suuqa Saakay, walina la la qaban Qaar kamid ah Kooxdii Weerarka soo qaaday, Sarkaalkaan ayaa beeninaya Warar ay faafisay Nabad Sugida Kenya oo ahaa in Xalay Dad badadan laga so saaray Suuqa.
"A security official involved in the rescue efforts tells me that no more hostages were rescued or released last night and none of the attackers have been taken into custody. This appears to contradict a bulletin from the Kenyan police that announced "most hostages" had been released last night." - Guy Alexander, Guardian
Kooxda Argagixisada Al-Shabaab ayaa Bartooda Twitterka soo gelisay Magacyada Sagaal ruux oo Dhalinyaro Soomaali kuwaas oo ay sheegeen inay fuliyeen Weerarka in howlgalka Westgate ee Nairobi. Dhalinyarada ayaa la sheegay inay kasoo kala jeedaan Dalalka Reer galbeedka sida Mareykanka, Canada, Ingiriiska iyo Finland... Halkaan Guji oo Akhriso Magacyada.
Kooxdii Weerarka qaaday ay wali Dad ku haysata gudaha, Tobanka Qof oo ay haystaan ayaa loo badinayaa inay wada yihiin dad u dhashay wadamada reer Galbeedka, ayna ku jiraan dad Yuhuud ah.
Ciidamada Weerarka ah oo ay ku jiraan kuwo ka yimid Israa'il ayaa ka cabsi qaba in dableydu ay xiran yihiin Suumanka Qarxa, sidaas darteedna aysan ku degdegi karin inay gudaha u galaan halka ay ku jiraan.
Suuqa ay ku jiraan ayaa waxa yaala Cunto iyo Cabitaan fara badan, wuxuuna leeyahay Musqulo, taasoo u fududeynaysa dableydu inay ku jiraan goobtaas intii ay doonaan, ilaa ay ciidamada Kenya ku dhiiradaan inay gudaha u galaan suuqa.
Warar Shalay soo baxay oo aan la hubin ayaa sheegayay in debleyda ay ku jirto Haweeney cadaan ah, sida ay sheegeen dad kasoo badbaaday weerarkaas. Waxaana durbadiiba ay warbaahinta reer Galbeedku ku fasireen inay gabadhaasi noqon karto Gabadha lagu naaneyso "White Widon" Samantha Lewthwaite oo uu ka geeriyooday nin ka tirsanaa kooxdii qaraxyada ka geystay magaalada London UK, 07-07-2005tii.
Gabadhan oo uu dhalay askari ka tirsanaa Ciidamada Ingiriiska, waxay qaadatay Diinta Islaamka, waxaana guursaday Germaine Lindsay oo qudhiisu Muslimay isla markaana Muslimiyay hooyadiis oo haysatay mad-habta Evangelical Christian, waxaana lagu sheegay inuu isku qarxiyay mid ka mid ah tareemada dhulka hoostiisa mara ee London.
Gabadhan ayaa dhowr Sanno ka hor lagu tuhmay inay soo gashay Wadanka Kenya iyadoo isticmaaleysa Baasaboor been ah oo laga leeyahay wadanka South Afrika, kadibna uga sii gudubtay Soomaaliya iyadoo halkaas ku biirtay Al-Shabaab, waa sida ay Sirdoonka reer Galbeedku faafiyeen, Waxaana dowladda Kenya ay tuhunsaneyd in gabadhaan ay dib ugu soo laabatay Kenya ayna ku dhuumaaleysaneyso gudaha Kenya, hadana ay dhici karto inay ku jirto dableyda haysata suuqa weyn ee Westgate.
Xaqiiqada warkaas ayaa la filayaa inuu soo baxo marka uu dhamaado howlgalka ka socda Suuqa Westgate.
Rasaas Culus ayaa Maalintii Sadexaad laga maqlay gudaha dhismaha dukaamada Westgate iyadoo Kooxdii Weerarka qaaday ay wali Dad ku haysata gudaha.
TV-ga laga leeyahay Dalka China ee CCTV Africa ayaa Xalay Video gaar ah soo saaray Youtube. Video-ga waxaa duubay Wariye wali ku jira Dukaanka, waxaana la arkayaa sida Dukaanka gudahiisa ay tahay.
Warkii ugu dambeeyay
Waa 11:30 oo Habeenimo, Xafiiska Keydmedia Online ee Nairobi meshaan ayuu Shaqada ku joojinayaa Maanta. Hadii alle idmo bari Subax ayaan Wararkii ugu dambeeyay idiin soo bandhigi doonaa. Boggan waxaa ka Aqrisan kartaa wixii Maanta dhacay. - Keydmedia Online, Nairobi
Hay'adda Red Cross ayaa Caawa Shaacisay (8:55 PM) in Dadka Weerarku ku dhinteen ay hada marayaan 68, kadib markii 9 kale laga soo bixiyay Suuqa.
Channel 4 News ayaa shaaciyay Wareysi uu Wariyaha Jamal Cusmaan la yeeshay Afhayeen u hadlay Kooxda Argagixisada ee Al-Shabaab. Ninkaan ayaa yiri "Kenya ma dageysi, waana Goob Dagaal "war-zone". Waxaan Ajaanibta ku sugan Dalka Kenya kula talineynaa in ay isaga baxaan Kenya"
— Jamal Osman (@JamalMOsman) September 22, 2013
17:33 - Waxaa Daqiiqado kahor ka dhacay Suuqa Qarax xooggan, ilaa iyo hadana ma cada Sababta iyo Khasaraha ka dhashay.
— Kyle Westaway (@kylewestaway) September 22, 2013
16:53 - Rasaas Wali laga Maqlayo Westgate
Warsaxaafadeed Daqiiqado kahor (12:00 Saacada Nairobi) ay qabteen Nabad Sugidda Dalka Kenya ayaa Warbaahinta loo sheegay in Dadka Weerarka ku dhintay ay hada marayaan 59, halka dhaawaca uu gaaray 175 Qof.
43 ayaa ilaa iyo hada ku Dhinteen Weerarka, halka 200 oo Qof ay ku dhaawacmeen.
Ciidamo Isreali ah ayaa Saakay kasoo dagay Garoonka Nairobi // Faahfaahin fillo dhawaan
Ciidamo Isreali ah oo gudaha u galay Suuqa Westgate
Sidaan Saakay soo Qornay Ciidamo gaar u tababaran oo laga soo diray Dalka Isreal oo Saakay kasoo dageen Kenyatta Airport ayaa Galabta gudaha u galeen Suuqa Westgatte oo Wali ku jira Gacanta Kooxdii Shalay Weerartay.
Ciidamadaan oo ah Ciidamo gaar u tababaran iyo Sirdoonka Isreal ayaa hada gudaha u galay Suuqa Westgate ee Dagaalka, Suuqa Westgatte ayaa waxaa iska leh Ganacsato Yuhuud ah oo Kenya degan.
Waxaa jira Warar sheegaya in Dadka la heysto ay ku jiraan Labo Nin oo u shaqeya Safaarada Isreal ee Kenya.
Ku dhawaad 24 Saacadood ayaa kasoo wareegtay markii Shalay Kooxo Hubeysan ay Weerareen Suuqa ugu Caansan Nairobi, welina wuu socdaa Weerarka oo lama qaban Raggii Werarkaan soo qaaday.
Ilaa iyo hada Wararka la hayo ayaa sheegay inay Dhinteen 39 Qof oo ay ku jiraan Labo dableydii Weerarka geysatay, halka ay dhaawacmeen dad tiradooda lagu qiyaasay 160 oo Qof.
Tiro aan la garanayn oo la-haystayaal ah ayaa wali ku xanniban Dhismaha, waxaana wali ka socda gudaha Xarunta is-rasaaseyn.
Ciidamada Kenya ayaa sheegay inay Gacanta ku hayaan dabaqa ugu koreeya Mall ka, mana garan karaan halka lagu heysto dadka. Walina Kooxda Weerarka soo qaaday waxey ku jiraan dhismaha.
Ajaanib badan oo lagu Dilay / Lagu Dhaawacay
Ilaa iyo hada waxa la ogyahay inay ku dhinteen Laba Qof oo Canadian ah oo midi tahay Haweenay lagu magacaabo Annemarie Desloges oo 29 jir, kana shaqeyneysay safaarada Canada qeybteeda socdaalka.
Faransiiska ayaa qirtay in dad igu Geeriyoodeen halka wadanka Maraykanku uu sheegay hal Qof oo uga dhaawacmay.
Waxaase wali jira dad ku go'doonsan gudaha Mall ka oo lagu heysto oo aan la kala ogeyn wadamada ay u dhasheen. Sidoo kale madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata ayaa sheegay in gudaha suuqaas ay ku jireen kuna waxyeeloobeen dad qaraabadiisa dhow ah.
Warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in Habar la dhalatay Madaxweyne Uhuru ay kasoo badbaaday weerarkaas.
Sida Safaarada Soomaaliya ee Nairobi ay sheegtay waxaa Weerarkaani ilaa iyo hada ku dhintay Hal Nin oo Soomaali ah, Ninkaas oo lagu Magacaabo Yaasiin Xirsi ayaa ka tirsanaa Hay’adda Iida.
Al-Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyada
Weerarkaan oo ay sheegteen Kooxda Argagixisada Al-Shabaab ayaan wali dhamaan waxana gudaha ku jira dadkii weerarka geystay iyo qaar kale oo ay ku heystaan. Dadka soo baxsaday ayaa sheegaya in dableydu ay waydiiyeen Diinta ay heystaan qofkii sheegta inuu yahay Muslimna waa lasoo deynayay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa barteeda Twitter oo hada laga xiray, ku qirtay inay kala saarayeen Muslimiinta iyo Gaalada. Waxayna Al-Shabaab sheegeen in dowladda Kenya ay codsatay wadahadal nabadeed oo ay la gasho dableyda dadka ku heysta gudaha, waxayse Al-Shabaab sheegeen inaysan jiri doonin wax wada hadal ah oo ay la galaal dowladda Kenya.
“Mujaahidiintu maanta waxay galeen xarunta ganacsi ee WESTGATE oo ku taalla bartamaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya,” ayaa lagu yiri warka Al-shabaab ay soo saartay maanta.
“Kenya waxaan kula dagaalamaynaa gudaha dalkeeda, waxaana xaruntaas aan ku dilnay in ka badan 100-qof oo Kenyan ah,”
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo cambaareeyay weerarka, ayaa ku dhawaaqay in dawlada Kenya ay iska difaaci doonto kooxaha argagixisada ee uu yiri waxay soo weerareen Kenya.
Westgate Mall oo ku yaala xaafada Westland ee galbeedka Nairobi ayaa ah Suuq ay inta badan ka adeegtaan kuna qaxweeyaan Ajaanibta iyo dadka Lacagta leh ee degan Nairobi.
Mall-kan ayaa waxa ku dhex yaal 80 Dukaan oo iskugu jira kuwo adeeg, maqaayado, baarar iyo suuqyo waaweyn oo badankood laga leeyahay wadamada reer Galbeedka, waxaana Mall iska leh Nin Isreali ah.
Keydmedia Online - Xafiiska Nairobi | Ediitorial Desk